Zulu - PM Proofreading
PM Proofreading is Global Proofreading and Editing Services Provider
Izinsizakalo ze-PM Proofreading Services zihola abahlinzeki bezinsizakalo zokuhlola nokulungisa amaphutha ezisungulwe ngo-2012. Sinikeza izinsizakalo zethu zokuhlola amaprofesa, abacwaningi bezemfundo, abafundi abaphothule iziqu, amajenali, amanyuvesi, osomabhizinisi kanye nochwepheshe bemboni emhlabeni wonke. Izinsizakalo zethu ziqinisekisiwe ngekhwalithi ngokuthembeka, futhi uhlelo lwethu oluhlelekile luphephile futhi luyimfihlo yokuthula okuphelele kwengqondo. Impendulo evela ekubuyeleni kwamakhasimende aphesheya ikhombisa idumela lethu lekhwalithi, ukuguqulwa okusebenzayo namanani afanele.
Inqubo Yethu Yokuhlola
Inqubo yethu ehlelekile ifaka phakathi ukufunda okuningiliziwe (isipelingi / typos, uhlelo lolimi, izimpawu zokubhala) nokuhlela (ukwakheka kwemisho, ukuhlangana kwemicabango nokugeleza, ukusetshenziswa okuqondile nokucacile kolimi, amatemu / ithoni yezifundo). Sipholisha umbhalo wakho wesandla bese siwulungiselela ukushicilelwa noma ukuphrintwa. Silandelela lonke ushintsho olwenziwe emsebenzini wakho, ukuze ukwazi ukudlula kuzo zonke izinguquko ezenziwe bese ukhetha ukuthi ulwamukele noma ulwenqabe ushintsho ngalunye. Kokubili inguquko yezinguquko ezilandelwayo kanye nenguqulo yokugcina ehlanzekile yombhalo wakho wesandla ibuyiselwa kuwe. Siphinde futhi sengeze imibono lapho ungathuthukisa khona ukubhala kwakho. Isheke lokugcina eliqinile lokuqinisekisa ikhwalithi liyenziwa ngumfundi wesibili wokuhlola ukuqinisekisa ukuthi umbhalo wesandla ubuyiselwa emuva ungenamaphutha.
Abahloli Bethu BesiNgisi
Ithimba lethu liqukethe ochwepheshe bezihloko, abaneziqu ezisezingeni eliphakeme ezingeni le-Master’s ne-PhD kusuka emanyuvesi aphezulu. Wonke umfundi ohlola amaphutha ufunda ngokukhethekile emkhakheni othile, futhi angahlela imibhalo yesandla ngaphakathi kobungoti babo. Ngale ndlela umhloli wokuhlola uyakwazi ukuhlela kahle umbhalo wesandla, ngoba ujwayelene namagama asemqoka kanye namagama akhethekile asetshenziswe kuleyo nkambu. Ama-Proofreaders avela kuzo zonke iziyalo ayatholakala.
Banokuhlangenwe nakho kweminyaka eminingi kokuhlolwa kokuhlolwa, futhi banobuchwepheshe obudingekayo bokuhlola ngokucophelela umsebenzi wakho uphelele, kuyilapho ngasikhathi sinye kugcinwa kokubili incazelo ehlosiwe nokuthinta kwakho uqobo. Amalungu eqembu lethu ngamunye enza inqubo eqinile yokuqashwa, futhi alandela izinqubo zokuhlola amaphutha eziqinisekiswe ngekhwalithi njengalezo ezisetshenziswa yi-‘Chartered Institute of Editing and Proofreading ‘(CIEP). Amanye amalungu eqembu lethu abhalwe ngezansi.
Ukusebenzisana namayunivesithi womhlaba jikelele
Besibambisene ngqo nabafundi abenza iziqu, osolwazi kanye nabasebenzi bezemfundo abavela emanyuvesi emhlabeni wonke kusukela ngonyaka wezi-2012. Sicela uxhumane nathi uma ufisa ukusebenzisana nathi.